Nhau - Remangwana tekinoroji kuona kwekuona: Vana logic vakazivisa "kudzokera kumberi 2" maglev DeLorean nguva mota
Nhasi rinongova zuva rakajairika kuvanhu vazhinji, asi izuva rakakosha kune vateveri vemuvhi yekare "kudzoka kumberi 2". Nhasi izuva iro Marty naDr.Brown, ivo protagonists venyaya, vanodzoka kune ramangwana. Kuchengeta zuva iri, zvigadzirwa zvakawanda zvemberi zvine chekuita nefirimu zvakatangwa zvakateedzana.
Munguva pfupi yapfuura, imwe kambani yekutambisa yeHong Kong inonzi vana logic yakazivisa DeLorean nguva mota ine kusimiswa kuita kudzoreredza yechinyakare bhaisikopo iyo mota yave kuda kusimuka kuburikidza nehonye. Icho chigadzirwa chose chakakamurwa kuita hwaro uye DeLorean mota modhi. Nekushandisa iyo magnetic levitation musimboti, mota yakaturikwa pamusoro pechigadziko. Chigadzirwa chose chinotaridzika chaizvo sci-fi. Nehurombo, ichi chigadzirwa hachizoiswe kutengeswa kusvika kune yechitatu kota ya2016 pakutanga. Naizvozvo, zviri chete mune yekutanga-yekutengesa nhanho parizvino. Kana iwe uine chinangwa chekuzvitenga, unogona kuzvitakura kubva kune yehupenyu mifananidzo muTaiwan. Nekudaro, iyo yepamutemo yekutengesa mutengo yakakwira kunge 1600 Hong Kong madhora (anenge 1310 yuan). Iwe unofanirwa kufunga zvakajeka usati watsemura maoko ako.
Shamwari dzakaona iyo firimu vese vanoziva kuti iyi modhi yakavakirwa pane iyo DeLorean dmc-12 modhi mufirimu yechipiri yeakateedzana. Mukuru uyu akataura kuti ndeye 100% yakavimbika kune iyo yekutanga firimu maererano nekugadzirwa. Gonhi remapapiro egapuro, muchina wenguva nemavhiri ari mudhiramu zvese zvakagadzirwa kuti zvive zvakafanana neupenyu. Chiyero cheiyo modhi ndi1: 20, saka kureba chaiko kwemuenzaniso i22 cm. Muviri wemotokari unemwenje inopfuura gumi yemwenje ye LED, iyo inogona kuburitsa mwenje unopenya uye unopenya. Mushure mekubvisa iyo yekumisa yemagineti uye nekutsiva iyo modhi neakajairika matairi, inogona zvakare kuratidzwa seyakajairwa mota modhi.
Chirevo chekutanga chekutengesa: tenga mifananidzo
Mutengo wepamutemo: 1600 Hong Kong madhora (anenge 1310 yuan)